Ukujolisa elektroniki nangaphaya, uGrace Bestbuy iye ezizodwa kwi-elektroniki yabathengi, izixhobo zombane ekhaya, software yekhompyutha kunye hardware, izibambiso kunye nokhuseleko, Telecoms, elektroniki auto, njalo njalo Thina abasasazi kunye neearhente iinkampani ezininzi brand kurhwebo lwehlabathi, kwaye HUAWAI, MI , Haier, Hisense, TCL, Green, Vivo nje ezimbalwa ukusuka amakhulu yemiyinge abadumileyo ehlabathini. Senza OEM kunye ODM kubathengi ezikhethekileyo ehlabathini lonke.
Ukuze ibe yinkampani ngokwaneleyo uyayiqonda kwaye uyazanelisa imveliso, inkonzo kunye neemfuno self-inzaliseko abathengi zehlabathi.
Grace Bestbuy awawakhayo umntu phezu 3 IMBEKO: ukunyaniseka, ingqibelelo kunye nokusebenza nzima. Ngokugxila waqhubeka ezi zithethe, iqela lethu sizibophelele isebenza imini nobusuku ukuphumeza ulwaneliseko yabathengi kwaye ikhuphe imveliso liphezulu-ezisemgangathweni iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki.